Muzukuru waPauro Ainge Akashinga | Dzidzisai Vana Venyu
Ngatidzidzei nezvemumwe mukomana akaponesa upenyu hwasekuru vake. Muapostora Pauro ndiye aiva sekuru vemukomana wacho. Hatizivi zita remukomana wacho, asi tinoziva kuti akaita chimwe chinhu chinoratidza kushinga. Ungada here kunzwa zvaakaita?—
Pauro aiva mujeri kuJerusarema. Akanga asungwa nokuti aiparidza nezvaJesu. Vamwe varume vakaipa vaivenga Pauro, saka vakaronga kuita chimwe chinhu chakaipa. Vakati: ‘Ngatikumbirei mutungamiriri wemasoja kuti auye naPauro kudare. Tichavandira munzira, uye Pauro paanopfuura, tichamuuraya!’
Muzukuru waPauro akaudza Pauro nemutungamiriri wemasoja zvakaipa zvaida kuitwa
Muzukuru waPauro akanzwa nezvenyaya iyi. Akaita sei? Akaenda kujeri kwacho ndokuudza Pauro nezvazvo. Pakarepo, Pauro akaudza muzukuru wake kuti ataurire mutungamiriri wemasoja nezvenyaya yacho. Unofunga kuti zvaiva nyore here kuti muzukuru waPauro ataure nemutungamiriri wacho?— Zvaisava nyore nokuti mutungamiriri wacho aiva munhu mukuru. Asi muzukuru waPauro ainge akashinga uye akataura nemutungamiriri wacho.
Mutungamiriri wacho akanyatsoziva zvokuita. Akaita kuti masoja anoda kusvika 500 aperekedze Pauro! Akaaudza kuti aende naPauro kuKesariya usiku ihwohwo. Pauro akapona here?— Varume vaya vakaipa havana kukwanisa kumurwisa! Zvakaipa zvavaida kuita hazvina kubudirira.
Chii chaungadzidza kubva panyaya iyi?— Iwewo unogona kushinga kungofanana nemuzukuru waPauro. Tinofanira kushinga patinotaura nevamwe nezvaJehovha. Uchashinga woramba uchitaura nezvaJehovha here?— Kana ukadaro, ungaponesa upenyu hwemumwe munhu.
Vamwe varume vakaipa vaida kuitei kuna Pauro?
Chii chakaitwa nemuzukuru waPauro? Nei izvozvo zvaida kushinga?
Ungaratidza sei kushinga sezvakaita muzukuru waPauro?